November 1, 2021 - Babal Khabar
Nov12021 by बबाल खबरNo Comments
बिहान ढिलासम्म सुत्ने बानी छ ? डिमेन्सिया होला है
यो भिडियो हेर्नुस, राति ढिलासम्म बस्ने र बिहान ढिलासम्म सुत्ने केही मानिसहरुको बानी हुने गर्छ । अधिकांश मानिसहरु रातिको समयमा ढिलासम्म पार्टीमा रमाउने र मध्यरातमा मात्रै सुत्न जाने गर्दछन् । यस्तो बानी छ भने तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यो स्वास्थ्यको लागि यो हा'निकारक हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । वैज्ञानिकहरुको एक संस्थाले गरेको अध्ययनले बिहान अबेरसम्म सुत्ने व्यक्ति मस्तिस्क रोगबाट गम्भीर रुपमा ग्रसित हुने कुरा पुष्टि गरेको छ । जसलाई डिमेन्सिया नामले चिनिन्छ । डिमेन्सिया एउटा मान'सिक रो'गको यस्तो स्थिति हो, जसमा दिमागसँग जोडिएका कयौं सम'स्याहरु हुने गर्दछन् । आम रुपमा डिमे'न्सिया हुँदा व्यक्तिको स्मरण श'क्ति क'मजोर हुन्छ । यो रो'ग लागेपछि मानिसमा काम गर्ने क्षम' पनि कम हुने गर्दछ । स्म'रण शक्ति नै न' हुने ख'तरा डिमे'न्सिया एक न्यूरोलोजि'कल स'मस्या हो । जसको कुनै उपचार
निद्रा लाग्दैन ? यस्ता टिप्स तपाईंको लागि काम लाग्न सक्छ !
यो भिडियो हेर्नुस, के तपाइलाई निद्राको समस्या छ ? यस्ता टिप्सहरु तपाइलाई काम लाग्नसक्छ । हेरौं भिडियो, – मधुरो प्रकाश बालेर सुत्न ओछ्यानमा जानुभयो भने सजिलोसँग निद्रा पर्छ ।– ओछ्यानमा पल्टिएपछि मोबाइल चलाउँदा निद्रा लाग्दैन । त्यसैले मोबाइल स्विच अफ गरेर अथवा मोबाइल साइलेन्समा राखेर सुत्नुपर्छ । – सधैँ एकै समयमा सुत्ने र उठ्ने बानी बसाले अनि'को स'मस्या हट्दै जान्छ ।– सुत्नुअघि कडा व्या'याम गरे शरी'रमा रक्त'सञ्चार तीव्र हुन्छ । जसले गर्दा नि'द्रा लाग्दैन । त्यही भएर सुत्नुभन्दा कम्तीमा चार घण्टा अघि मात्रै व्यायाम गर्नुपर्छ । – राति अ'उँजेल खाने बानी छ भने त्यो सुधार्नुहोस् । तरकारी, दाल, फलफूल, सलाद, दूधजस्ता हलुका खानाले राति मीठो निद्रा लगाउँछ । – निद्रा लगाउन म'राको चु'स्की लिने बानी छ भने छो'डिहाल्नुस् । किनकि, म'दिराले केहीबेर मात्र नि'द्रा लगाउँछ । एक पटक बिउँझि'
यस्तो देश जहाँ महिलालाई पुलिसमा भर्ती गर्दा कुमा’रि’त्व परीक्षण !
भिडियो हेर्न तल थिच्नुस, काठमाडौँ । प्रह'री वा सैुनिकमा भर्ती हुन मानिसको शारी'रिक बनावट, स्वाुस्थ्यको अवस्था, उमेर र शैक्षिक यो'ग्यता हेर्ने गरिन्छ । तर, के तपाईले प्रह'रीमा भ'र्ती हुन महिलाको कु'मा'रित्व नापिएको खबर सुन्नु भएको छ रु यदि छैन भने हामी तपाईलाई त्यो बारेमा जानकारी दिन्छौँ । इन्डोनेसियामा पुलि'समा भ'र्ती हुनका लागि महिलाहरुको कु'मा'रित्व जाँच गर्ने अनौ'ठो चलन छ । त्यहाँका महिला प्र'हरीमा जागिर खान चाहन्छन् भने पहिला उनीहरूको ‘भ'र्जि'नि'टी’ चेक गरिन्छ । चेकमा कुमा'री नदेखिएका महिला प्रहरी सेवाका लागि यो'ग्य ठा'निदैनन् । अनौठो र रोचक कुरा त के छ भने, जागिर खान चाहने महिलाको कु'मा'रित्व पनि पुरुषले नै चेक गर्छन् । इन्डोनेशियामा यो कार्यलाई ‘दुई औँ'ले’ जाँच भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामका अनुसार प्रहरीमा भर्ना हुन गएका महिला उम्मेदवारको यौ'ना'ग'ङ्मा दु
प्रेमीले यस्तो पत्याउनै नसकिने कार्य गरिदिय कि केही बेरमै प्रेमिकाकाे घरमा दर्जनौं पुरुष आएर ढोका ढक्ढक्याए …
हेर्नुहोस यो भिडियो, एक महिलाले दुः'खद् भोगा'इ सुनाउँदै आफ्ना प्रेमीले कसरी क्यामेरा लुकाएर आफ्नो न'ग्न भिडियो बनाए। ती भिडियोलाई पो'र्न साइ'टमा हालिदिएर आफूलाई प्र'ता'डित गरे भन्ने विषयमा बताएकी छिन् । यति मात्र होइन प्रेमीले ती महिलाको ठेगाना समेत पो'र्न सा'इटमा हालिदिएका थिए । त्यसपछि त्यही ठेगानाका आधारमा यौ'नको माग गर्दै दर्जनौं पुरुष उनको ढोका ढक्ढ'क्याउन आइपुगे । मिररको रिपोर्ट अनुसार इङल्या'ण्डको बर्मिं'घमकी तीन सन्तानकी आमा शेरोन थम्प'सनले दु'खद भो'गाइ सुनाएकी हुन् । शे'रोनका अनुसार डेरेन नामका एक व्यक्ति २ वर्षसम्म उनका ब्वाइफ्रेण्ड थिए । एक दिन महिलाको घरमा कैयौं अन्जान मानिसहरु आएको देखेपछि उनी दंग परिन् । ४० वर्षकी शे'रोनका अनुसार त्यस दिन केही घण्टामै १२ जना पुरुषले उनको घरको ढोका ढक्ढ'क्याएका थिए । घरमा लगातार पुरुष'हरु आउन थालेपछि उनी ड'राइन् । त्यसपछि आएक
अनौठो रेष्टुरेन्ट : जहाँ काम गर्छन् चम्बा र चमेली नामका यस्ता रोबोट ( भिडियो सहित )
भिडियो हेर्न तल थिच्नुस, हामी अहिलेसम्म गएका होटलमा अर्डरको लागि वेटर आएको देख्नुभएको होला । त र भारतको भुवनेश्वरमा रेष्टुरेन्टमा दुई रोबोट काम गर्छन् । उनीहरुको नाम चम्बा र चमेली रहेको छ । त्यहाँको होटलमा खाना पस्किनको लागि समेत रोबर्टको प्रयोग गरिन्छ । यो दृश्य देख्नको लागि मानिसको भीड लाग्ने गरेको बताइएको छ । भिडियो हेर्न तल दिइएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् : #WATCH: Robo Chef,afirst of its kind restaurant in Bhubaneswar, has robots to serve food to the customers. The restaurant currently has two robots. #Odisha pic.twitter.com/OHfdjDlybM— ANI (@ANI) October 16, 2019 यो पनि। १७ रुपैंयामा प्रेमिका पाइन्छ भन्दा कसैले झट्ट पत्ताउँदैनन् । १७ रुपैंयामा प्रेमिका भाडामा लिएर घुम्न जानु सौभाग्य हो । यो सुअवसर हाम्रो देशको नभएर दक्षिण चीनको गुआडोंगाको हो ।जहाँको ‘द भाइटलि